Uyenza njani i-EC2 Instance ye-AWS
Inkqubo yokwenza imeko ye-EC2 xa usebenzisa i-AWS inokuba nzima kakhulu. Unokwenza ngesandla izibini ezisetyenziselwa ukungena kulo mzekelo, umzekelo, okanye wenze iqela elikhethekileyo lokhuseleko ukunceda ukugcina ukhuseleko lwe-EC2. Ukongeza, ungasebenzisa i-AMI yesiko ukumisela imeko yakho. Ingxaki kukuba onke la manyathelo ongezelelweyo enza ukuba yintoni ekufuneka ibe yinkqubo elula yeenjongo zokulinga kunzima kakhulu.
Amanyathelo alandelayo abonisa indlela elula neyona ikhawulezayo yokwenza imeko ye-EC2. Nangona kunjalo, gcinani engqondweni ukuba unokwenza okungakumbi ngokuseta kwe-EC2. Le nkqubo ithatha ukuba sele ungene kwaye ukhethe ummandla ofanayo osetyenziselwa ivolumu ye-EBS.
iyeza yecvs yepinworm amayeza
Khetha amaXesha → amaXesha kwindawo yokuhamba.
I-AWS ikuxelela ukuba awunazo iimeko ze-EC2 ezisebenzayo.
Cofa kwiNdawo yokuQalisa.
Ubona uthotho lwamangeniso e-AMI. IAmazon inayo zonke ezi AMIs. Unokukhetha kwakhona ukusebenzisa i-AMI yakho okanye ufumane ukufikelela kwi-AMI kwindawo yentengiso ye-AWS okanye uLuntu.
Ukuqala umzekelo, kufuneka ukhethe enye yee-AMIs ezikhoyo.
Qaphela ukuba i-AMI yokuqala iphawulwe njengelungelo lokuma ngokukhululekileyo. Ngaphandle kokuba ufuna ukuhlawulela ukusebenzisa i-EC2, kuya kufuneka ukhethe elinye lamaNgeniso afanelekileyo eTier afanelekileyo, abandakanya iAmazon Linux, Red Hat Linux, SUSE Linux, Ubuntu Linux, kunye neWindows Server (zonke zikwiinguqulelo ezahlukeneyo). Ukuqinisekisa ukuba awukhethi ngengozi ukhetho oluhlawulelweyo, khetha i-Free Tier kuphela ibhokisi yokujonga kwicala lasekhohlo lephepha.
Cofa u-Khetha ecaleni kwe-Amazon Linux AMI 2017 yokungena.
Uyabona uluhlu lweentlobo zemizekelo. Olunye lweendidi zomzekelo lubhalwe uphawu lwasimahla olufanelekileyo. Kuya kufuneka ukhethe olu khetho ngaphandle kokuba ufuna ukuhlawulela umzekelo wakho we-EC2.
Khetha uhlobo lomzekelo ofuna ukuwenza.
ungathatha i-flexeril nge-ibuprofen
Ukukhetha ukuqwalasela iinkcukacha zomzekelo okanye ukutshintsha iimfuno zokugcina kuya kwenza uhlobo olutsha lomzekelo. Uhlobo olutsha lomzekelo aluyi kulungela ukuba simahla. Ungalujonga ukhetho olwahlukeneyo olukhoyo, kodwa ucofe Rhoxisa endaweni yokwenza umzekelo ukuba ufuna ukuqhubeka nokusebenza ne-AWS ngaphandle kwentlawulo.
Khetha uhlobo lomzekelo ofuna ukulwenza kwaye ucofe uphononongo kunye nokuSungula.
Uyabona inyathelo lesi-7: Phonononga iphepha lokuQalwa kweziNto Eli nani libonisa icandelo lamaQela oKhuseleko. Xa usenza imeko yakho, iAmazon ikuxwayisa ukuba nabani na angayifumana. Ngenxa yokuba mhlawumbi ufuna ukusebenza ne-EC2 ngasese, kuya kufuneka uguqule useto lweqela lokhuseleko ukunciphisa umngcipheko wokujonga amehlo.
Hlaziya ubumbeko lomzekelo ngaphambi kokuba uwuzise.
Cofa kuHlela amaQela oKhuseleko.
Uyabona iNqanaba 6: Qwalasela iphepha leQela lezoKhuseleko.
Yenza iqela elitsha, elikhuselekileyo lokhuseleko lwe-EC2.
Elona xesha lilungileyo losuku lokuthatha iJanuwari
Chwetheza -Ukuqalisa okungagqibekanga kwicandelo leQela lezoKhuseleko.
Sebenzisa igama leqela elifutshane kwaye linentsingiselo ukunqanda ukudideka okunokubakho kamva.
(Ngokuzithandela) Chwetheza inkcazo yeqela kwicandelo lenkcazo.
Khetha Zonke izithuthi kwicandelo lohlobo.
Sebenzisa olu khetho kukunika ukufikelela okuphezulu kwe-EC2. Nangona kunjalo, kuseto lwehlabathi lokwenyani, ulinganisela ungeniso lwentsimi yohlobo kwiiprotocol oceba ukuzisebenzisa. Umzekelo, ukuba awucwangcisi ukusebenzisa iShell ekhuselekileyo (i-SSH) ukunxibelelana ne-EC2, sukuyifaka kuluhlu lweenkqubo ezivunyelweyo.
Khetha i-IP yam kwicandelo loMthombo.
Ngokunciphisa ukufikelela kwi-IP yakho kuphela, unciphisa amathuba okuba nabani na afikelele kuseto lwe-EC2. Nangona kunjalo, abangeneleli banokufumana zonke iindlela ngeendlela zokulumka, njengokusebenzisa Ukonakala kwe-IP .
Cofa Yongeza Umgaqo.
I-AWS yongeza umthetho kuluhlu. Cofa u X ecaleni komgaqo omtsha owenziwa yi-AWS ngokuzenzekelayo kwezinye iimeko ukuyisusa; awuyidingi.
Cofa uHlaziyo kunye nokuSungulwa.
Ikhonsoli yoLawulo ye-EC2 ikubuyisela kwiNyathelo lesi-7: Ukujonga kwakhona iphepha lokuQalwa kweziXhobo.
Ubona i Khetha isitshixo sePaulo esele sikhona okanye Yenza iBhokisi yencoko yababini yePeyile eNtsha.
Khetha izibini eziphambili ofuna ukuzisebenzisa.
Khetha Khetha isibini esikhoyo kwi-field yokuqala.
Khetha i-MyKeyPair kwicandelo lesibini.
Khetha ibhokisi yokukhangela ukuze uvume ukuba uyakwazi ukufikelela kwisitshixo sangasese emva koko ucofe iiNdawo zoQeqesho.
I-AWS iqala kwimeko yakho ye-EC2. Ibhokisi yencoko yababini inikezela ngolwazi olongezelelweyo malunga nemeko yakho. Qaphela ikhonkco kumzekelo wakho kwiZihlandlo zakho ngoku zokuSungula ibhokisi.
IAmazon ibonelela ngolwazi olongezelelekileyo malunga nemeko yakho ngelixa ulinde ukuba iqale.
Cofa kwikhonkco lakho.
Uyabona ulwazi olusebenzayo.
Qinisekisa ukuba imeko yakho iyasebenza ngaphambi kokuba uzame ukunxibelelana nayo.
iziphumo ebezingalindelekanga zepetroli
iinxalenye zepiyano enkulu
levofloxacin 500 mg kunye notywala
ip 190 ipilisi emhlophe
ivithamini e kunye newarfarin